ခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိသည့်တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်သည့်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - YiZheng Heavy Machinery Co. , Ltd.
ကျွန်ုပ်တို့သည် dryless extrusion granulation ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်ပြည့်စုံသောအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရှိလုပ်ငန်းစဉ်ချိတ်ဆက်မှုတိုင်းကိုအာရုံစိုက်ရုံသာမကထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုစီ၏လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်များကိုလည်းအမြဲတမ်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် YiZheng Heavy Machinery Co. , Ltd နှင့်သင်၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အဓိကအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်။
ခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိသည့် Extrusion Compound Fertilizer ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း အမျိုးမျိုးသောကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်မြင့်မားသော၊ အလတ်စားနှင့်အနိမ့်ကျသောပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာများထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ခြောက်သွေ့ရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြောက်သွေ့စရာမလိုသောခြောက်သွေ့သော extrusion granulation ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်အဓိကအားဖြင့်ရောနှောခြင်းနှင့် disk feeder၊ roller extrusion granulation စက်၊ roller ဆန်ခါစက်၊
ခြောက်သွေ့သော extrusion granulator တွင်အလိုအလျောက်ပါဝင်သောပစ္စည်းများ၊ ခါးပတ်သယ်ဆောင်များ၊ biaxial ရောနှောစက်များ၊ disc feeders များ၊
2. Double Shaft မြေသြဇာရောနှော
3. ကြိတ်စက် extrusion granulator
4. Rotary စည်မြင်ကွင်း